Search တငျဇာဝငျ့ကြျော - BajarFB.com
Search Results - တငျဇာဝငျ့ကြျော
"တခြို့အခနျးတှကေ ဆငျဆာအဖွတျခံရတယျ၊ တခြို့အခနျးတှကေ ဝါးခံရတယျ၊ တခြို့ဝတျတာ ပုံစံခငျြးတူတာတောငျမှ သူမြားတှလေဲဖွတျတယျ၊ ကိုယျ့လဲဖွတျတယျဆိုတာက ကိစ်စမရှိဘူးလေ၊ တကယျလို့ ကိုယျ့ကိုမှ ကှကျဖွတျတယျဆိုရငျ ဝမျးနညျးမိမှာတော့ အမှနျပဲ" ရုပျရှငျဇာတျကားတှမှော ဝတျစားဆငျယဉျမှုနဲ့ပတျသကျပွီး ဆငျဆာဖွတျခံရတာတှရှေိနတေယျလို့ သရုပျဆောငျ သငျဇာဝငျ့ကြျောကပွောပါတယျ။ #DVBTV #PTT #news_highlight #သငျဇာဝငျ့ကြျော #ဆငျဆာ DVB TV News 24 Aug 2019 · 3.1M views
G-String ဘဲ ဝတျရတာ ကွိုကျတယျ ဆိုတဲ့ မမသငျဇာ
"G-string ဝတျရတာ ကွိုကျလို့ G-String အတှငျးခံဘဲ ဝတျတတျတယျ။ တဈစက်ကနျ့ခွငျး Screen Capture ရိုကျပွီး ကွညျ့ကွတဲ့ ကိုကို တှကေို လေးစားပါတယျ.. Salute ပါ" လို့ ပွောလာတဲ့ မမသငျဇာ နှငျ့ ခဏတာ။ Myanmar Celebrity TV Update: Actress Thinzar Wint Kyaw reacts on her viral Tik Tok video with G-string. #ThinzarWintKyaw #MyanmarActress Myanmar Celebrity TV 17 Nov 2019 · 16M views
How to beat insomnia. 😴 bit.ly/2Jgm6N7
How to beat insomnia. 😴 bit.ly/2Jgm6N7 5-Minute Crafts6May 2019 · 12M views
IG က မွနျမာတှေ သုံးတာနညျးလို့ ကိုယျလုံးပျေါပုံ တငျမိလိုကျတာ..
"အခွားသူ စိတျကနြေပျနပျ မနပျနပျ ၊ ရငျခုနျဖို့ ကောငျးကောငျး မကောငျးကောငျး ကိုယျကွိုကျလို့ ကိုယျ အှနျလိုငျးပျေါ တငျလိုကျတာ။ ကိုယျ့အတှကျ စိတျကနြေပျမှု ရသှားရငျ ပွီးရော" လို့ Instagram/ IG မှာ အဖွူအမဲ ကိုယျလုံးပျေါ ပုံတငျလိုကျတာ နဲ့ ပတျသကျပွီး ပွောလာတဲ့ သရုပျဆောငျ သငျဇာဝငျ့ကြျော နှငျ့ ခဏတာ။ Myanmar Celebrity TV Update: Actress Thinzar Wint Kyaw talks about her naked black & white photo on instagram. #ThinzarWintKyaw #MyanmarActress #MaMaThinzar Myanmar Celebrity TV4Jan 2020 · 10M views
ဆရာဆိုးရဲ့သားကောင် ဖြစ်သွားရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကျောင်းသူ
ကာမမုဆိုး ဆရာဆိုး တစ်ဦးနဲ့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပေမယ့် ဘဝကို အရှုံးမပေးတဲ့ ကျောင်းသူလေး အခု နှစ်ပိုင်းတွေထဲမှာ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု သတင်းတွေ အများအပြား တွေ့လာရသလို အစိုးရရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် စာရင်းဇယားတွေမှာလည်း အသက် ၁၆ နှစ်အောက် မိန်းကလေး အဓမ္မ ပြုကျင့်ခံရမှုတွေ တိုးလာတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လိင်အကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေ လျှော့ချနိုင်ဖို့ အတွက် ပိုမို ဖွင့်ဟ ပြောဆို တိုင်ကြားကြဖို့ လှုံ့ဆော် တိုက်တွန်းမှုတွေ ရှိပေမယ့် အရှက် အကြောက်နဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝန်းရဲ့ ဖယ်ကြဉ်ခံရမှာစိုးတဲ့ အတွက် ထုတ်ပြောဖို့ ခက်နေကြတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမှာ ကိုယ်တိုင် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူတွေ မိန်းကလေးငယ် တစ်ဦးကတော့ ဘဝကို အရှုံးမပေးဘဲ သူ့ကိုယ်သူ ပြန်လည် တည်ဆောက်ယူရင်း လာမယ့် မတ်လ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ မိန်းကလေးငယ်နဲ့ သူ့မိခင်ကို ဘီဘီစီအကြီးတန်း သတင်းထောက် ကိုငြိမ်းချမ်းအေးက သီးသန့်တွေဆုံ မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ https://goo.gl/NRK3Yp ရိုက်ကူး - ကိုစံကျော်ထွန်း #ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #အမျိုးသမီး #ကလေးသူငယ် #လိင်အကြမ်းဖက်မှု #အဓမ္မပြုကျင့်မှု #သက်ငယ်မုဒိမ်း BBC Burmese 8 Feb 2019 · 1.7M views